Media Club Nepal « Media Club Nepal
Author: Media Club Nepal
मिलिजुली कालिञ्चोक साकोसको मानव संशाधन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न
दोलखा । दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा अवस्थित मिलिजुली कालिञ्चोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले सञ्चालनमा रहेका आठ वटा सेवाकेन्द्रहरुको सेवाकेन्द्र ब्यवस्थापन मानव संशाधनको क्षमता बृद्धि गर्न तालिम कार्यक्रम सम्पन्न
सरोज श्रेष्ठ (वैद्य) काठमाडौँ उपत्यकाको कोटेश्वरमा सवारी साधनको अत्यधिक जामका कारणले भोग्नुपरेका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न पत्रपत्रिकामा आएका कुराहरूलाई समेटेर केही कुरा राख्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ । अरनिको
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले माघ पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपर्ने बताएको छ । शुक्रबार प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले माघ पहिलो हप्ताभित्र
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरू, सार्वजनिक स्थल र भिडभाड हुने ठाउँमा कोभिड १९ विरुद्ध खोप लगाएको प्रणाण देखाउन खोप कार्ड अनिवार्य गरिएसँगै त्यसबारे धेरैमा चासो र चिन्ता बढिरहेका छन् । कतिपयले
काठमाडौं । तीव्र गतिमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि काठमाण्ड उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधवारदेखि विभिन्न प्रतिबन्धात्मक नियमहरू लागु गरेका छन् । तर त्यस्ता प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू पालना हुनेमा कतिपयले
पिपुल्स साकोसको नयाँ कार्यालय कृषि मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंद्वारा उद्घाटन
काभ्रे । बनेपामा रहेको पिपुल्स बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को नयाँ कार्यालयको उद्घाटन बागमति प्रदेशका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंले गर्नुभएको छ । कार्यालय उद्घाटन गर्दै
काठमाडौं । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको मूलद्वारबाहिर अवस्थित पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मङ्गलवार अपराह्ण माल्यार्पण गरेका छन् । त्यहाँ पूर्वराजाका शुभेच्छुक साथै राजतन्त्रलाई समर्थन गर्ने दलका प्रतिनिधिहरू
सिन्धु विकास बैंकको सीइओमा राम कुमार गिरी नियुक्त
काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा राम कुमार गिरी नियुक्त भएका छन् । पुस २६ गते सोमबारदेखि लागुहुने गरी गिरी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका हुन्
जनसचेतन साकोसका सिईओ नवराज दहाल जिल्लाकै ‘उत्कृष्ट सहकारी व्यवस्थापक’
दोलखा । दोलखा जिल्लाको मैनापोखरीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको जनसचेतन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज दहाल जिल्लाकै उत्कृष्ट सहकारी व्यवस्थापकको रुपमा सम्मानित भएका छन् ।
काठमाडौं । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि कोभिड संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीले विद्यालयहरू बन्द गर्नेसहित सरकारलाई चार सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले सार्वजनिक सेवा तथा हवाईयात्राका लागि खोप लगाएको